Markii ugu horreysay … ee uu ka dilaacey Corona Hindiya wuxuuna ku dhacey yihiin 110qof mudo 1 saac kahor – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Markii ugu horreysay … ee uu ka dilaacey Corona Hindiya wuxuuna...
Markii ugu horreysay … ee uu ka dilaacey Corona Hindiya wuxuuna ku dhacey yihiin 110qof mudo 1 saac kahor
Hindiya ayaa shaacisay, isniintii, in ay kordheen tirada kiisaska cusub ee cudurka coronavirus, oo ay gaarayaan 110, halka Raiisul Wasaaraha uu ku baaqay abuuritaanka sanduuq mideysan oo loogu talagalay wadamada Koofurta Aasiya si loola dagaallamo cudurka faafa.
Narendra Modi wuxuu sheegay in Hindiya ay 10 milyan oo doollar ku deeqi doonto sanduuqa si looga hortago Corona, sida uu ku soo waramay wariye ka tirsan Sky News Arabia ee New Delhi.
Moody ayaa wadahadalo la yeeshay, isagoo u maraya shir fiidiyaha, Axadda, oo uu la yeelanayo hoggaamiyeyaasha gobolka Koonfurta Aasiya, si ay iskugu dubbaridaan wax ka qabashada xiisadda gobolka.
Gobolka galbeedka ee Maharashtra, oo ay kujirto caasimada dhaqaalaha ee wadanka, ayaa waxaa soo foodsaaray cudurka ugu daran ee faafa, iyadoo maamulka deegaanka ay xireen iskuulo, jaamacado iyo xarumo ganacsi oo kuyaala inta badan magaalooyinka ay kamid tahay Mumbai, xarunta dhaqaalaha ee India.
Hindiya, oo ay ku nool yihiin 1.3 bilyan, ayaa aad uga fiican xilligan marka loo eego waddamada kale ee Aasiya, Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, iyadoo waddanku uu soo tebiyay laba dhimasho oo keliya fayraska.
Laakiin khubarada ayaa sheegaya in nidaamka caafimaad ee horeyba u soo gaboobay Hindiya uu la kulmi doono dhibaatooyin marka lala tacalayo kororka weyn ee xaaladaha daran.
Hindiya ayaa horey u joojisay fiisooyinkeedii fiisayaasha waxayna xireen xuduudo badan oo dhulal ah oo ay la wadaagto waddamada deriska ah dadaal looga hortagayo faafitaanka viruska.